Ilungelo elilodwa lomenzi we-Apple libonisa i-iPhone yoyilo lwe-Mac Pro | IPhone iindaba
Kufuneka kuthiwe uyilo lwamva nje lweMac Pro, ngakumbi kwiimodyuli kunangaphambili, wagxekwa ekusungulweni ngokufana ne "cheese grater" kwaye kamva xa unayo phambi kwakho, ungathanda ukuba nale iMac kwitafile yakho yegumbi lokutyela ukonwabele uyilo lwayo olubonakalayo lwangaphandle.
Inyani yile yokuba olu luyilo alunakukuthanda wonke umntu kodwa alunanto yakwenza ne-grater yetshizi xa unayo phambi kwakho. Kwiintsuku ezithile ezidlulileyo patent entsha ebhaliswe yinkampani yeCupertino ibonise i-iPhone yoyilo lwale iPhone Ucinga?
Ilungile kwezinye izinto ezimbi kwabanye
Ngokucacileyo ukongeza oku kuyilwa kwe-Apple Mac Pro kwi-iPhone unakho inezinto zayo ezilungileyo kwaye ngokucacileyo ezinye izinto ezimbi. Ukuthetha ezinye zezinto ezintle, ubukhulu becala siza nobushushu obuchithakeleyo okanye ukubambeka okumangalisayo. Kobubi, asifumani chasana namanzi okanye neengxaki zokungcola ngaphakathi kwesixhobo ...
Ilungelo elilodwa lomenzi libonwa kwiwebhu Ngokukhawuleza Apple Singangena ngaphezulu okanye ngaphantsi ngokubona kodwa okucacileyo kukuba kubonakala ngathi kunzima kwiApple ukongeza uyilo lweMac Pro kwi-iPhone kwixesha elifutshane okanye elide. Kungenzeka ukuba izinto ezisetyenziselwa ukwenza iMac Pro ziya kuphela zikhokelela kwi-iPhone okanye sinokuba nento efanayo kuyilo ngolunye usuku, kodwa ukukopa olu luyilo kubonakala ngathi kungazisa ukungalunganga ngakumbi kunezibonelelo kwi-iPhone. Ingaba ucinga ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » I-Apple patent ibonisa i-iPhone kuyilo lwe-Mac Pro